Muungaab oo hoggaaminaya xaraash iyo boobka lagu hayo dhulka danta guud ah ee MUQDISHO !! - Caasimada Online
Home Warar Muungaab oo hoggaaminaya xaraash iyo boobka lagu hayo dhulka danta guud ah...
Muungaab oo hoggaaminaya xaraash iyo boobka lagu hayo dhulka danta guud ah ee MUQDISHO !!
Muqdisho (Caasimada Online) – Eng. Suleymaan Yuusuf Dirgax oo ka mid ah Injineerada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku sugan, muddo ka badan 40 sanno ku soo jiray howlaha dhismaha ayaa ka digay boob lagu hayo dhulalkii danta guud ee ku yiilay Muqdisho.
Wuxuu Injineer Suleymaan sheegay in billihii ugu dambeeyey si xowli ah ay ku soconayaan boobka hantida Qaranka, oo uu sheegay in ay ku lug leeyihiin Madaxda sare ee Dowladda & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir; wuxuuna xusay in dhulalkii danta guud la xaraashayo, iyada oo dhaqaalaha lagu iibiyeyna si shaqsi ah loo isticmaalayo.
Eng. Suleymaan wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dhowaan Guddoomiyaha Gobolka & Marwada Madaxweynaha ay xaraasheen dhul ku yiilay agagaarka Garoonka Dayuuradaha ilaa Ex. Dugsigii hore ee Farsamada (Boli tikniko), wuxuuna sheegay in ay nasiib darro tahay in hantidii ummadda lagu boobo shaar Dowladeed..
“Maamulka Gobolka Banaadir wuxuu hadda xaraashayaa dhulkii Ex. Carwadii hore, waxaanna boosaskaas loo iibinayaa 20X20, boos kastana waxaa la siisanayaa $50.000 (Kun kun dollar)” Ayuu yiri Injineerka, wuxuuna ugu baaqay Baarlamaanka Soomaaliya in arrintaasi xil gaar ah iska saaraan.
“Maalmahan madaxda Dowladda waxeey aad u doon-doonayaan dhul bannaan, 2 billood ka hor dhulkii Ceymiska lahaa ee ku yiil Ex. Kontarool Afgooye ayaa loo fasaxay in musharax C/kariin Xuseen uu iibsado, waxaanna laga siiyey 100 boos, si dhaqaalaha ka soo xarooda uu doorasho ugu galo, Dowladnimo Soomaaliya waa kaga dhammaatay madaxdii dalka boobkii hantida waxeey ku darsadeen boobka dhulalkii Qaranka” Ayuu yiri Injineerka wuxuuna ku celiyey in cid kasta oo ku xadgudubta hantida Qaranka in maalin un la la xisaabtami doono.
“Dal burburkiisa Calaamadaha lagu garto ayeey ka mid tahay marka sharcigii & cadaaladdii ay noqdaan wax koox gaar ihi ay ku muraad-qunsato. Halkii madaxdu ay tusaale wanaagsan u noqon laheyd ummadda, haddii madaxdii ay boobeyso hantidii ummadda waa nasiib darro” Ayuu yiri Injineerka.